Dadaalladii Baydhabo ee xal raadinta oo fashilmay | KEYDMEDIA ENGLISH
Dadaalladii Baydhabo ee xal raadinta oo fashilmay
Xildhibaanno mucaarad ah, oo ay ka mid yihiin, Mahad Salaad, Sanbaloolshe iyo Dhagdheer, waxa ay wadeen qorshe ah, in Lafta-gareen, oggolaado in dib loogu laabto doorashada HOP#154, isla-markaana loo fasaxo labada kaliye, hayeeshee, qorshahaas, waxaa seynta ugu istaagay Qoorqoor iyo Xildhibaanno kale oo ka socday Fahad.
BAYDHABO, Soomaaliya – Isku day la doonayay in Xildhibaannada laga soo doortay Maamulka Koofur galbeed, uga qeyb galaan dhaarinta Baarlamaanka 11-aad oo loo asteeyay 14-ka bishaan ayaa fashilantay, sida ay Keydmedia Online u sheegeen, howl-wadeenno ka tirsan xaafiiska Cabdicasiis Xasan Lafta-gareen.
Xogta ay KON, ka heleyso, Baydhabo, ayaa sheegeysa in hoggaanka maamulkaas, ka dhago adeegay qorshe ay wadeen wafti Qoorqoor hoggaaminayay oo dhawaan Xarunta maamulka gaaray, oo ahaa, in la dedejiyi xalka, ka hor 14-ka April, hayeeshee, xubno ka mid ahaa waftiga, oo ka socday Fahad Yasiin ayaa curyaamiyay qorshahaas.
Inkastoo markii hore Lafta-gareen, muujiyay dabacsanaan iyo inuu u qoordhiiban karo, qaar ka mid ah xubnaha waftiga, haddana dib ayuu go’aankiisuu hore u laqay, wuxuuna miiska soo saaray in xalku uu ku jiro gacmaha RW Rooble, kaliyana Xildhibaannada KGS, ka qeyb gali karaan dhaarinta, haddii la fasaxo kuraasta xayiran.
Is-beddelka Laftagareen, wuxuu sii xoojiyay kala shaki markii horaba ka dhex jiray xubnaha Waftiga, waxaana si degdeg Muqdisho ugu soo laabtay, Xildhibaannadii waftiga ku wehlinayay Qoorqoor, halka Madaxweynaha Galmudug oo la sheegayo inuu mushkilada qeyb ka yahay, ku haray magaalada Baydhabo ee gobolka Bay.
Inkastoo dhawaan Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya uu Midowga Musharixiinta u sheegay in uusan dirin waftiga Baydhabo, haddana xubnaha mucaaradka ah, ee waftiga ku jiray ayaa rumeysnaa in ay Rooble, kaa dhicin karaan xal kasta oo la gaaro, waxayna qabeen kalsooni iyaga oo aan idmaneyn, hayeeshee, dadaalkoodu ma mira dhalin.
Qoorqoor, Qoryooley iyo Cawad, waxa ay Lafta-gareen, ku garab istaageen in aan kuraasta la kala reebin, isla-markaana gor-gortanka laga saaro, kuraasta KGS, ee la furo doodda kursiga Fahad iyo kuraasta Garbahaarre, taas oo muujineysa in dadaalladii socday fashilmeen, Xildhibaannada Baydhabana aysan ka qeyb gali doonin dhaarta.
Sida ay ku doodayaan howl-wadeennada xaafiska Lafta-gareen ee KON, u warramay, ma jirto sabab uu Lafta-gareen, xero ugu sii heyn karo Xildhibaannada, haddii Guddiga FEIT iyo Rooble, la yimaadaan mid la ah qorshihii Xildhibaannada mucaaradka ah wadeen oo an in saddexda kursi labo ka mid ah la fasaxo midka kalana Xildhibaan Sareedo lagu soo celiyo.
Kooxda waqtigu ka dhamaaday ee Fahad iyo Farmaajo, hoggaamiyaan ayaa u muuqda in ay ku fashilmeen in ay hor istaagaan dhaarinta Xildhibaannada, oo ay dadaal ku bixinayeen, waxaana xusid mudan in, in ka badan 200 oo Xildhibaan dhameystireen ku biiritaanka baarlamaanka 11-aad, isla-maraaka buuxaan kooromyada labada Aqal.